Kadib Magacaabista Chelsea Ee Frank Lampard -Miyuu Labadan Shaxdood Midkood Ku Ciyaari Doonaa Xili Ciyaareedka Cusub? - Gool24.Net
Kadib Magacaabista Chelsea Ee Frank Lampard -Miyuu Labadan Shaxdood Midkood Ku Ciyaari Doonaa Xili Ciyaareedka Cusub?
Frank Lampard ayaa si rasmi ah loogu magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Chelsea waxaana halayaygii hore ee Stamford Bridge horyaala dhibaatooyin waa wayn oo aanu la soo kulmin tababare kasta oo hore Blues uga soo shaqeeyay.
Frank Lampard ayaa ku soo beegmay waqtiga ay Chelsea ku jirto ganaaxa ay FIFA ka saartay suuqa kala iibsiga isla markaana uu kooxda ka baxay sidigii ugu muhiimsanaa ee Eden Hazard.
Lampard oo 41 sano jir ah ayaan lahayn khibrad badan oo tababaranimo ah kadib markii uu hal xili ciyaareed oo kaliya ka soo shaqeeyay kooxda heerka labaad ee Derby County oo uu shaqo cajiib ah ka soo qabtay.
Haddaba shax noocee ah ayuu Frank Lampard ku ciyaari karaa xili ciyaareedka cusub ee kooxdiisa Chelsea haddii ayna ku guulaysan rafcaanka ay ka qaadatay xiyaarada suuqa laga saaray?
Chelsea ma aha koox ay ciyaartoy la’aani hayso waxaana jira tiro badan oo ciyaartoy ah kuwaas oo amaah dibad wareeg ku ahaa sanado badan iyo waliba kuwo aan kooxda ku haysan fursadii ay u baahnaayeen.
Dadka qaar ayaa u arka in ganaaxa suuqa laga saaray Chelsea uu faa’iido kooxdeeda u yahay si ay fursad u siiyaan ciyaartoyda aadka u badan ee ay amaahda ku kala direen.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa laba shaxood oo ay suurtogal tahay in Lampard uu ku soo shirtagi karo xili ciyaareedka cusub ee Chelsea.
Wax shaki ahi kama jiro in Lampard uu goolhaye Kepa ka dhigan doono midka ugu horeeya ee magaca xaashida shaxdiisa laakiin dhamaan 10 ka boos ee kale waa kuwo shaki laga muujinayo.
Kulamada furitaanka xili ciyaareedka cusub waxaa la filayaa in Lampard aanu kooxdiisa ku heli doonin adeegii Antonio Rudiger, Ruben Loftus-Cheek iyo Callum Hudson-Odoi kuwaas oo dhaawacyo kala duwan ka soo kabsanaya balse wali waxay qayb ka noqon karaan qorshihiisa xili ciyaareedka cusub.
Shaxda Kowaad Ee Uu Lampard Ku Soo Shirtagi Karo:
Shaxda LabaadEe Uu Lampard Ku Soo Shirtagi Karo
Christian Pulisic oo ah saxiixa ugu muhiimsan ee ay Chelsea ku sii guulaysatay bishii January ayaa awood u leh in uu ka ciyaari karo saddexda weerarka ah wuxuuna Lampard u buuxin karaa weerarka dhexe ama waxa uu ka dhigan karaa mid booskii Eden Hazard u dhamaysitiri kara.
Willian iyo Pedro Rodriguez oo ah laba ciyaartoy oo khibrad leh ayuu Lampard u adeegsan karaa in ay la tartamayaan ciyaartoyda kale ee da’yarta ah ee uu doonayo in uu fursada siiyo.
Kovacic ayaa isna heshiiskiisii amaahda ahaa laga dhigay mid rasmi ah halka Higuain dib loogu celiyay kooxdiisii Juventus laakiin haddii ay Chelsea ku guulaysato in ganaaxa suuqa dib loogu dhigo waxa uu Lampard heli karaa fursad uu saxiixyo muhiim ah ku samayn karo.
Haddaba akhriste, haddii aad Chelsea taageere u tahay labadan shaxood midkeed jeclaan lahayd in uu Lampard ku soo shirtago xili ciyaareedka cusub? Haddii aanad labadan shaxood ku qancin isla markaana uu wali Chelsea ganaaxu suuqa ka sii saarnaado maxaad ku badali lahayd?.
shaxde hore jorginho ku badal mount